သက်ဝေ: ကန့် သတ် ချက် များ
ကန့် သတ် ချက် များ
အခွင့် မရှိ မဝင်ရ (အချစ် မရှိ မဝင်ရ)
၃ တန် ယာဉ်များ မဝင်ရ
စီတန်း လှည့်လည်ခြင်း မပြုရ
ရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင် ဖိနပ် မစီးရ
သီဆို တီးမှုတ် ကခုန်ခြင်း မပြုရ
ဧည့်ချိန် ပြင်ပ မဝင်ရ
လူနာ လာတွေ့သူများမှ အပ မဝင်ရ
ဤနေရာများသို့ ဖြတ်သန်း သွားလာခြင်း မပြုရ
လဘက်ရည် ကော်ဖီ မသောက်ရ
ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းသို့ အစားအစာများ ယူဆောင်ခွင့်မပြု
အခု လောလောဆယ် ခေါင်းထဲရောက်နေ၊ တွေးနေမိသော အကြောင်းအရာ၏ ခေါင်းစဉ်မှာ "ကန့်သတ်ချက်များ" ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ စာကြောင်းများသည် မျက်စေ့ဖြင့် အလွယ်တကူ မြင်သာ ထင်သာရှိလှသော ကန့်သတ်ချက်များကို တွေးမိသမျှ၊ မှတ်မိသမျှ ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တဆက်တည်း တွေးနေမိသည်မှာ ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှ နေ့စဉ် ရှင်သန်နေထိုင်ကြရသော ဘဝတွေတိုင်းတွင် အလွယ်တကူ မမြင်ရသော၊ အလွယ်တကူ မမြင်နိုင်သော အတားအဆီးများ နှင့်အတူ ကန့်သတ်ချက်ပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိနေပါသေးသည် ဟူ၍ပင်...။
မပြီးဆုံးနိုင်သော အတွေးများဖြင့် . . .
Labels: Thoughts, ကဗျာ
P.Ti February 18, 2010 at 6:04 PM
(ကွန်မန့်တိုတိုမရေးရ လို့ ပြောမထားလို့ တော်ပါသေးရဲ့)
ကြည် February 18, 2010 at 6:07 PM
sonata-cantata February 18, 2010 at 6:27 PM
မနေ့ကပဲ ယပ်တောင်လေးနဲ့ ကပြမိပါတယ်။
ခုတော့ သူက သဘင်သည် မ၀င်ရ တဲ့
မျက်ရည် လည်ရွဲနဲ့ ပြန်သွားပါပြီ...း(
လင်းဒီပ February 18, 2010 at 6:49 PM
ကားလမ်းပေါ် လှည်းမမောင်းရ ။
သံဘီးတပ်ယာဉ် မမောင်းရ ။
ဘာကြောင့်ရပ်ရပ် လမ်းဘေးချ ရပ် ။
ယာဉ်နှစ်ထပ် မရပ်ရ ။
အလုပ်ဆင်းပြန် မမေ့ရန် မီးနှင့်ပန်ကာပိတ် ။
အခမဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း သီးခံပါ ။
khin oo may February 18, 2010 at 7:16 PM
khet myint myint February 18, 2010 at 7:40 PM
အခွင့် မရှိ မဝင်ရ (မချစ် မရှိ မဝင်ရ)
အချစ်မရှိမဝင်ရ ဖစ်မယ် ထင်တယ်နော်..
အပြုံးပန်း February 18, 2010 at 8:24 PM
အလှူခံခြင်းသည်းခံပါ၊ ဆိုတဲ့ အိမ်တွေ မြင်ဖူးတယ်၊
အမျိုးသမီးများ မ၀င်ရ ဆိုင်းဘုတ်လည်း မြင်ဖူးတယ်၊
အချစ်မရှိမ၀င်ရ ဆိုတဲ့ သီချင်း ကြိုက်တယ်။
Anonymous February 18, 2010 at 8:29 PM
pandora February 18, 2010 at 8:30 PM
အဲဒါ ဒန် နေတဲ့ ကဗျာ
သက်ဝေ February 18, 2010 at 8:50 PM
ကပီတိ... စာမရေးပဲ အပျင်းမထူရ
ကြည်... လျှော့နိုင်ဘူး... ဟမ်...
သီတာရယ်... ငိုပါနဲ့... တိတ်တိတ်...
သီတာ့ကို ပြောတာ ဟုတ်ရပါဘူး...း)
ယပ်တောင်ကလေးနဲ့ ကတာ ဒီလောက် လှတာ...
လင်းဒီပ... မောင်လေး တော်တယ်... ကျေးဇူး...
မမ... အစက် မချရ...း)
ခမမ... ပြင်လိုက်ပြီ... ကျေးဇူး...
ပေါက်ကွဲနေလို့ စာလုံးပေါင်းတောင် သေချာ မစစ်လိုက်နိုင်ဘူး...း))
အပြုံးပန်း... ညီမ တွေးလို့ရသလောက် လာပြောပြအုံးနော်...
ပေါက်... မပေါက်ကွဲရ...း))
ပန်... ဒန် နေတာလား... မှန် နေတာလားတော့ မသိ...း))
Anonymous February 18, 2010 at 9:00 PM
နေမထွက်ရ လို့ ဘယ်သူမှ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး သက်ဝေရေ..
ဧရာ February 18, 2010 at 10:07 PM
ဆေးမှန်မှန်သောက်ပါ ... နိုင်ငံတော်အလံကို အလေးပြု ...ကန့်သတ်မှုမြောက်မြားစွာထဲမှာ တိုက်တွန်းမှုလေးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ် ... ။
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ February 18, 2010 at 10:09 PM
လက် မထုတ်ရ မဟုတ်လား
Hmoo February 18, 2010 at 11:09 PM
Don't drink & drive (Coffee also)
Sin.. Driver manual.
Welcome February 18, 2010 at 11:41 PM
စည်းနဲ့ ဘောင်နဲ့ ဖြစ်စေချင်လို့ ကန့်သတ်ချက်တွေ ထွက်လာတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ..
လိုတာထက် ကန့်သတ်တွေ များလာတော့လည်း မွန်းကြပ်တယ် .. စိတ်ကျဉ်းကြပ်တယ် ..
တစ်ချို့ ကန့်သတ်ချက်တွေက တစ်မျိုး (ရ)မပါဘူး
(ကိုကိုနော်) ဆိုတာနဲ့တင် ........... အကုန်ရပ်တန့်သွားရော
Moe Cho Thinn February 19, 2010 at 12:48 AM
စာနဲ့ မရေးထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ပိုစဉ်းစားမိသွားတယ်။
အတွေးနယ် မချဲ့ရ။ :)
Thant February 19, 2010 at 9:27 AM
ဒါတောင် မမြင်နိုင်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေမပါသေးဘူးနော်..... :'(
ရွှေရတုမှတ်တမ်း February 19, 2010 at 11:11 AM
T T Sweet February 19, 2010 at 12:51 PM
Anonymous February 19, 2010 at 6:05 PM
ဒီကဗျာက အောက်က လင့် မှာ တင်ထားတဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ သဘောချင်းတူတူပဲနော်။
သက်ဝေ February 19, 2010 at 10:26 PM
အမ ခင်မင်းဇော်... သဘာဝကိုသာ ကန့်သတ်လို့ တားလို့မရတာ၊ ကျန်တာတွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေက များမှများရယ်... နှစ်သိမ့်စရာ ချစ်စရာ အတွေးလေး ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ အမရေ...
ကိုဧရာ... ဟုတ်... ဆေးလဲ မှန်မှန်သောက်ပါတယ်...
အလံတော်ကိုလဲ စိတ်ထဲက အမြဲတမ်း အလေးပြုပါတယ်...
ရွာသားလေး... ပြင်လိုက်ပါပြီတော်... တကတဲ... ပြောမယ်ဆိုတာချည်းပဲ...း((
Hmoo... Don't worry... But ကော်ဖီသောက်ခြင်းကို မကန့်ကွက်ရ... (ပြင်းထန်စွာ အရေးယူမည်)
ကိုဝင်းဇော်... “ရ” မပါတဲ့ ကန့်သတ်ချက်ကို ကြိုက်တယ်ဗျာ...း))
ဧကန္တတော့ အဲဒီ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ကန့်သတ်ခံနေရပြီထင်တယ်... ဟဲဟဲ
ချိုသင်း... အဲလို အတွေးနယ်ချဲ့မိလို့ ရေးမိတဲ့ စာကြောင်းတွေပါ...
သန့်ကလေး... တွေးရတာ မောတယ်...
ဆွိ... ကြား သုံးကြားနော်... ဟွန်း... ကြောက်ဖူးလား...း))
ဘလော့ဂ်ဖတ်သူ... ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေပေါ့လေ... ကျေးဇူး...ဟုတ်တယ် တူနေသလိုပဲ... ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွေးက ကန့်သတ်ချက်တွေ များတယ်...း))
ချစ်ကြည်အေး February 21, 2010 at 8:36 PM
ရိပ်သာအတွင်း ယောဂီများ စကား မပြောရ
ယောဂီများ တရားမှတ်နေသည် ဧည့်သည်များ စကားကျယ်ကျယ် မပြောရ
ယောဂီများ နှစ်ယောက် ယှဉ်တန်း၍ လမ်းမလျောက်ရ
နောက်လူ ရှိသည် ရေချိုးခန်းအတွင်း သွားမတိုက် အဝတ်မလျော်ရ
ယောဂီများ အမှတ်လွတ်၍ အဟာရ မသုံးဆောင်ရ
ရိပ်သာ အတွင်း စကပ်၊ အင်္ကျီလက်ပြတ် မဝတ်ရ
ရိပ်သာအတွင်း အမျိုးသားများ စွပ်ကျယ် ဂျိုင်းပြတ် မဝတ်ရ
တရားခန်းမဆောင်ထဲ ဟန်းဖုန်း ယူဆောင် မလာရ
အင်း...လောလောဆယ်တော့ ဒါပဲ ခေါင်းထဲရှိ ....:))
တန်ခူး February 22, 2010 at 12:41 PM
အတွေးလေးက ဆန်းတယ်… မောတယ်သက်ဝေရေ…
ဆောင်း February 23, 2010 at 9:59 AM
အတွင်းလူ မထွက်ရ ပေ့ါနော်
သက်ဝေ February 24, 2010 at 9:33 PM
ချစ်ကြည်... တန်ခူး... ဆောင်း...
ကိုယ်လဲ စိတ်မောမောနဲ့ ခေါင်းထဲရှိတာ ချရေးလိုက်တာပါ...း))
ရွှေပြည်သူ March 1, 2010 at 12:45 AM
အစ်မက မှတ်မိလိုက်တာ...း)) ကန့်သတ်ချက်တွေကို (“နားနား မဖတ်ရ”လို့ မပြောပေမယ့်) အသက်မရှုဘဲ ဆက်တိုက်ဖတ်သွားပါတယ်...း))
myo March 19, 2010 at 9:56 AM
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ (၂)
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ (၁)
တည်ဘွားဦး – အသည်းကွဲစက်ရုပ် - KT# အသည်းကွဲစက်ရုပ် တည်ဘွားဦး (မိုးမခ) မေ ၂၆၊ ၂၀၁၈ အသက်မရှိပါဘူးဆိုမှ သွေးတိုးတာကို ခဏ ခဏ စမ်းတယ် ပန်းပွင့်ကလေးတွေ ကြွေတာကြည့်ရင်း ငိုလို့လည်းမရ ရယ်လုိ့လည...